Himalaya Dainik » लकडाउन प्रभाव बन्दा किलोको दुई रुपैयाँं !
लकडाउन प्रभाव बन्दा किलोको दुई रुपैयाँं !
उनले एक सय पोका बन्दाकोपी दुई ठाउँंमा गरेर निःशुल्क वितरण गरेको जनाए। अझै पनि भएका बन्दा त्यसरी नै वितरण गर्ने योजना रहेको उनले सुनाए। वन्दा वितरण गर्दा चोकमा सामाजिक दुरी कायम गरी गोलोगोलो बनाई राखेर त्यसभित्र एउटाएउटा पोको बन्दा राखेका थिए।नागरिक न्युज मा खबर छ -तस्बिर फाइल
प्रकाशित मिति १५ जेष्ठ २०७७, बिहीबार २२:०५